Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Trinidad na Tobago Elections: Enweghị ndị na-ekiri ihe na-eme
Na-agbasa News Travel • Editorial • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago • Akụkọ dị iche iche
Ntuli aka nke Trinidad na Tobago
N'iburu n'uche ntuli aka Trinidad na Tobago nke ga - eme ụbọchị ole na ole, achọrọ m ịkekọrịta echiche m.
NK BTA Akụkọ gbasara nzukọ ọha na eze ICDN ZOOM n'abalị Sọnde gara aga (2/8/20) na isiokwu -
"Enweghị ndị na-ahụ maka ntuli aka na August 10th Ntuli aka na Trinidad na Tobago:
Nwere ike ịtụkwasị obi na ntuli aka na ókèala Commission (EBC)? ”
Ndị kwuru ya bụ RALPH MARAJ, DR INDIRA RAMPERSAD na PRỌFESỌ SELWYN CUDJOE tinyere DR BAYTORAM RAMHARACK dochie anya RAVI DEV dị ka onye na-ekwu okwu a.
MARAJ kwuru na ọ na-echegbu onwe ya banyere enweghị ndị nleta si mba ofesi, ọkachasị ndị ọrụ Commonwealth. Ọ gbakwụnyere, “Ọ bụ ezie na anyị nwere ọdịnala nke ntuli aka na enweghị ntuli aka, enweghị nkwa ọ ga-aga n'ihu. Anyị kwesịrị ịmụrụ anya. A gwara anyị na Mịnịsta Ala natara akwụkwọ ozi site na Commonwealth na-ekwupụta na ha agaghị enwe ike iziga ndị ozi n'okpuru ndokwa ịkwado ndịiche. Ma mgbe a gwara ya ka o gosi mba ahụ akwụkwọ ozi ahụ, Rowley zaghachiri, 'Ana m egosighi onye ọ bụla leta ọ bụla. Ana m agwa gị ndị mmadụ, ama m na ị ga-anabata nke a site na Mịnịsta Ala onye na-agwa gị eziokwu oge niile. ' Enweghị nchekasị amụbawo n'etiti ọtụtụ ụmụ amaala ka anyị na-erute ụbọchị ntuli aka. ”
DR RAMPERSAD kwusiri ike na ọrụ na mkpa nke ndị na-ahụ maka ndị mba ọzọ na-ahụ maka ahụmịhe akụkọ ihe mere eme, ntuli aka ndị na-adịbeghị anya na Guyana, nchegbu na Akụkọ nke ndị gara aga Ozi Ala ọzọ na amụma na nsonaazụ ga-abụ ọgụ dị nso. O hotara ikpe nke ikpe ziri ezi Dean Armorer na mkpesa ntuli aka nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị UNC megide EBC. Onyeikpe ahụ kpebiri: “N'ihi ya, ọ bụ m na-eche na m jide na ndọtị nke nghoputa na 7th Septemba 2015 dara iwu, ndị ọrụ ntuli aka na-emechighị imechi ntuli aka nke elekere isii nke mgbede mere ihe megidere Nkebi nke 6 (27) nke Iwu Nhọrọ.
PRỌFESỌ CUDJOE kwenyere na ndị niile na-ekwu okwu na ndị na-ele anya dị mkpa n ’ilekọta usoro ntuli aka ahụ, mana ọ hụghị na ọ dị mkpa. Ọ rụrụ ụka na mba ndị mepere emepe dịka USA, Canada na UK enweghị ndị na-enyocha ntuli aka. O kwuru na ọ bụ akụkụ nke ihe nketa colonial nke a ga-akpọrịrị ndị ọcha ka ha lekọta etu ndị isi ojii si eme ntuli aka: "Oge eruola ịgba egwu maka nnwere onwe anyị." Otu onye so na ndị na-ege ntị kwuru na ndị na-ekiri CARICOM dịkarịchara oji.
DR. RAMHARACK tụlere ọrụ nke ọtụtụ ndị ọrụ mba ofesi na ndị nke mba ahụ na-arụ n'ịhụ Machị 2nd Ntuli aka 2020 na Guyana. O kwuru na ndị ọkà okwu atọ gara aga anaghị ajụ ịnweta ndị na-ekiri ihe na ntuli aka T & T na August 10th. Ramharack rụrụ ụka na ọnụnọ ndị na-ekiri ihe na-emenụ ga-agbakwunye izi ezi na ntụkwasị obi na ntuli aka iji hụ na ọ ga-abụ nke onye kwuo uche ya.
AKW COMKWỌ AKWERKWỌ DR KUMAR MAHABIR: Ikpe ziri ezi Dean Armorer kpebiri na mkpebi EBC ịgbatị oge ntuli aka gara aga 6 elekere na ntuli aka 2015 adabaghị na iwu. N'agbanyeghị nke ahụ, enweghị Mazị Fern Narcis-Scope, mgbe ahụ onye ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara iwu EBC ma ọ bụ ndị ọrụ gọọmentị ọ bụla nke EBC, ebubo ebubo maka imebi iwu ma ọ bụ omume adịghị mma n'ọfịs ọha, ma ọ bụ kwụsịtụrụ ma ọ bụ chụpụ ya na EBC. Narcis-Spepe ga-achịkwa August 10 ọzọth Nhoputa 2020, oge a dika Onye isi nhoputa ndi ochichi (CEO).
Nzukọ ZOOM ọha na eze kwadoro www.icdn.tị
Dr. Kumar Mahabir, Onye Nchịkọba & Onye njikwa
Akụkọ Indo-Caribbean nke Indo-Caribbean (ICDN)
Trinidad na Tobago, Caribbean